intloko yeQa - iindima noxanduva
Eyona Qa INtloko yeQA-iiNdima noXanduva
Inhloko yendima ye-QA sisikhundla esiphezulu ngaphakathi kombutho esihlala sikwinqanaba elilandelayo ukusuka kwindima yomphathi weQA. Kweli nqaku, sidwelisa uxanduva lwentloko yeQA.
INtloko yeNdima yeQA
Kuxhomekeke kwindima nakwimibutho, iNtloko yeQA inokuba sisandla ukusuka kwindawo yokujonga yobugcisa okanye ukunikezela ngesandla kugxilwe kwisicwangciso kunye neenkqubo, okanye inokuba ngumxube wazo zombini.
Ngokwesiqhelo, inye kuphela indima yeNtloko yeQA kumbutho oya kuthi uchaze isicwangciso seQA kunye nendlela yazo zonke iimveliso zenkampani kwaye ekugqibeleni ube noxanduva lokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Indima ifuna ukucinga okucwangcisiweyo kunye nokucwangcisa kunye nokubonelela ngobuchule kuwo wonke umjikelo wobomi bemveliso yovuselelo ngengqondo eyomeleleyo yobunini bomgangatho uqinisekisa ukuba umgangatho ubhakwa kwasekuqaleni.
Kuba indima yeNtloko ye-QA kukuqhubeka kwendalo okulandelayo ukusuka kwindima yoMphathi we-QA, umntu lowo kufuneka abe nengxelo eqinisekisiweyo yokwakha amaqela eQA, ukulawula ukusebenza kunye nolwalathiso lwamaqela eQA. Umphathi uya kubonelela ngesikhokelo esiqhelekileyo, ukucebisa, kunye nokuqeqesha amalungu eqela le-QA, aqinisekise impumelelo yeenzame zeqela lesandla kunye nokuzenzekelayo.
INtloko yeQA iya kuba nobunini beendawo zeQA kuzo zonke iimveliso. Ukusebenza ngokusondeleyo ne I-DevOps iqela lokuchaza isisombululo esifanelekileyo seqonga ngalinye.
INtloko yeQA iya kuthi ithathe uxanduva lokuqinisekisa ukuba yonke imisebenzi yophuhliso ihlangabezana neenqobo ezisemgangathweni ngokucwangcisa uvavanyo, ukwenziwa kovavanyo, ukuqinisekiswa komgangatho kunye nokulandelwa kwemicimbi.
Kubalulekile ukuba iNtloko yeQA yongamele ukuhanjiswa kunye nokugcinwa kweemeko ezizenzekelayo kunye nezakhelo ezisekwe kwezona ndlela zingcono zeshishini.
INtloko yeQA Skills
INtloko yesiqhelo ye-QA umntu kufuneka abe nezakhono zilandelayo (hayi uluhlu olupheleleyo nangayiphi na indlela!)
Amava oLawulo lweQA kwiiprojekthi ezininzi, elunxwemeni nakwindlu.
Yiba yinkokeli eyomeleleyo enamava okuphumeza nokubumba iinkqubo zeQA zenkampani kunye nezicwangciso.
Yiba nezakhono zobuchwephesha ezomeleleyo, zombini ezisebenzayo nezingasebenziyo, ngesandla kunye nokuzenzekelayo, ngokufanelekileyo kwimeko yokuhambisa rhoqo.
Izakhono zonxibelelwano ezomeleleyo kunye nabo bonke abathathi-nxaxheba abaphambili ukuqinisekisa umbono weQA uyaqondwa kwaye uzalisekiswe ngokuchanekileyo.
Yiba ngummeli woQinisekiso lweMigangatho, uPhuculo oluqhubekayo kunye nomzi mveliso owamkelekileyo.
Ulwazi olugqwesileyo kuLawulo loMngcipheko, ukuChongwa koMngcipheko kunye noVavanyo olusekwe kumngcipheko.
Amava okulawula amasebe ovavanyo okanye imisebenzi yovavanyo, ukulawula imisebenzi emikhulu kunye nobunzima kunye neenkqubo.
Ukuguquguquka kunye nokukwazi ukusebenza kunye nokusebenza phantsi koxinzelelo.
Ukusebenza, ubomelele, ukucinga ngokukhawuleza kunye nokuzithemba.
Uyakwazi ukukhuthaza iqela, uqaphele italente elungileyo kwaye ukhuphe okona kulungileyo kumntu ngamnye.
Umntu oqolileyo kunye noqeqeshiweyo ozimeleyo kwaye onomdla.
Unxibelelwano olugqwesileyo, eziphembelela izakhono kunye nezakhono zothethathethwano ukufumana ulawulo lokuthenga ngaphakathi izimvo kunye neengcinga.
Uyakwazi ukunxibelelana nawo onke amanqanaba olawulo kunye noontanga ngaphakathi kwintlangano.
Ukwakha kunye nokugcina ubudlelwane.
Ukukwazi ukubeka phambili umsebenzi kunye nemisebenzi phantsi koxinzelelo.
Amandla okusingatha ungquzulwano ngokufanelekileyo.
Amandla okwakha, ukumilisela kunye nokuqondisa ngqo imigaqo-nkqubo yokuqinisekisa umgangatho kunye nokugcina umgangatho wokuhanjiswa.
Intloko yoXanduva lwe-QA
Uxanduva lokuchaza ubuchule beQA, indlela yokwenza kunye nokwenza iiprojekthi zophuhliso.
Uxanduva lokuKhokela nokukhokela iqela lobunkokeli leQA.
Ukubonelela ngobunkokheli kunye nobungcali bobuchwephesha ngaphakathi kovavanyo lokuZenzekelayo kunye nokuQinisekiswa koMgangatho.
Yiba noxanduva lokuphendula kuvavanyo oluzenzekelayo, ukucebisa, kunye nokubonelela ngobunkokeli kubaphuhlisi abazenzekelayo beQA kunye nabaphathi.
Thatha inxaxheba kudliwanondlebe, ukwenziwa, ukuqeqeshwa kunye nokuvavanywa kokusebenza kwazo zonke izikhokelo zeQA.
Ukubonelela ngobunkokeli bobuchwephesha kunye nobungcali kwicandelo loQinisekiso loMgangatho kunye noVavanyo.
Ukuqinisekisa ukuba amaqela ophuhliso ahambelana nemithetho-siseko, izikhokelo kunye neendlela ezilungileyo zesicwangciso seQA njengoko kuchaziwe.
Gxila kuphuculo lweQA oluqhubekayo kubandakanya ukusetyenziswa kwezixhobo ezifanelekileyo zovavanyo, iindlela zovavanyo, uvavanyo oluzenzekelayo.
Ukwakhiwa kunye nokugcinwa kwemigangatho esemgangathweni kunye nokunyanzeliswa kwemigangatho yobugcisa kunye nokuvavanywa.
Ukubeka iliso kuyo yonke imisebenzi yeQA, iziphumo zovavanyo, iimpazamo ezivuzayo, uhlalutyo lwesizathu kunye nokuchonga iindawo zokuphucula. Sebenzisa amanyathelo afunekayo ukuphucula iinkqubo.
Hlanganisa kwaye uzise iimvavanyo zokuvavanya kunye nemisebenzi yovavanyo lweeprojekthi kubantu abachaphazelekayo.
Qinisekisa ukusetyenziswa okufanelekileyo kwezixhobo ezikhoyo ukufumana eyona nzuzo iphezulu kumzamo weQA. Oku kubandakanya izixhobo zokuvavanya ukusebenza, ukusebenza, ukuzenzekelayo, njl.
Lawula uqeqesho kunye nokuqhubeka kokufunda kwabasebenzi beQA ngokusebenzisa izifundo ezimfutshane, iinkomfa, iintlanganiso, iziqinisekiso, njl.
Yiba yindawo yokunyuka kuyo yonke imicimbi enxulumene nokuvavanywa kunye nokuqinisekiswa komgangatho kwaye usebenze njengeyona ndawo iphambili yokunxibelelana namaqela eQA.
Khokela uphuhliso lwesicwangciso seQA, indlela yokusebenza, uqeqesho kunye nesakhelo. Ukuqhuba kunye nokuphucula iqela le-QA kwiindawo zovavanyo oluzenzekelayo kunye novavanyo lwe-agile.
Nika ubuchwephesha bobuchwephesha kuVavanyo oluzenzekelayo, iindlela zokuvavanya, iinkqubo zokuvavanya, izixhobo kunye nobuchule kumaqela onke.
Sebenza nabaphathi be-QA, abaphathi boPhuhliso kunye noMlawuli woPhuculo lweSoftware ukuphuhlisa nokwenza izicwangciso zeQA zokuhlangabezana kunye nokudlula kwiinjongo zomgangatho wesebe kunye nomgangatho.
Kule posi sifunde malunga nendima yeNtloko ye-QA, zeziphi izakhono ezifunekayo kunye nokulindelweyo kulowo uzalisekisayo.
I-LG V20 iyafumaneka namhlanje kwiivenkile ze-AT & T
Ungayithatha njani umfanekiso weskrini kwi-LG V30
Uyibuyisela njani inkxaso epheleleyo ye-codec (AC3, i-DTS) kwiMX Player, i-Android kunye neapos yeyona vidiyo yokudlala
I-Android 10 ene-UI 2.0 enye kwi-Samsung Galaxy S10 +: Izandla kunye nazo zonke izinto ezintsha
Sebenzisa i-smartphone yakho ukukhupha imali kwi-ATM yeBhanki yaseMelika